जनार्दनलाई भनिदिनु ‘दुर्गम रुकुमबाट बोकेर ल्याएकी लोबैको बेलैमा उपचार नपाएर मृत्यु भयो’ – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > Front News > जनार्दनलाई भनिदिनु ‘दुर्गम रुकुमबाट बोकेर ल्याएकी लोबैको बेलैमा उपचार नपाएर मृत्यु भयो’
२८ माघ २०७४, आईतवार २३:३६
पुर्वी रुकुम ।
यस्तै छ देशको ब्यबस्था, जहाँ नेताहरु सामान्य पखाला लाग्दा जांच बुझ गराउन विदेश सैयर गर्छन, तर दुर्गमका नागरिकहरु उपचार गराउन राजधानी जाँदा पनि त्यहीबाट घर फर्किन पाउदैनन । कारण आपतकालीन बिरामीले समयमा उपचार नपाउदा अकालमै मृत्य बेहोर्नु पर्छ ।
यस्तै रुकुम(पुर्व) को दुर्गम ठाउ पुथाउत्तरगंगाकी लोबै बुढाले आफ्नो अपेंडिक्सको उपचार समयमै गराउन नपाउदा मृत्यु अँगाल्नु परेको छ ।
रुकुम(पुर्व) पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं २ यामाखार निवासी हिरा बुढा मगरकी श्रीमती ३१ वर्षीया लोबै बुढा मगरको उपचारका क्रममा माघ २७ गते शनिबार बिहान ८ बजे काठमाडौंको बि एण्ड बि हस्पिटलमा निधन भयो ।
यातायातको सुविधा अझै पुगेको छैन, जसको कारण बेलैमा हस्पिटल पुर्याउन नसक्दा हिरा बुढाकी श्रीमती लोबै बुढाको अपेंडिक्स समयमै उपचार हुन सकेन र उनको कलिलो उमेरमै मृत्यु भयो ।
अपेंडिक्सको अपरेसन गराउन उक्त क्षेत्रका नागरिकहरु काठमाडौं र नेपालगन्ज भन्दा अनेत्र बिकल्प नै छैन । जव लोबै बुढालाई अपेंडिक्स भयो, त्यसपछि आफन्तजन साथीभाईहरुले उपचारका लागि बोकेर दुई दिनको बाटो हिडेर पिपलथुंग (बस भेटिने ठाउ) पुर्याउछन र जिपमा दिन र रात हिडेर काठमाडौं बिएण्डबि हस्पिटल भर्ना भइन । सुविधा युक्त हस्पिटल भेटाउन झन्डै चारदिनको बाटो हिड्नु पर्यो ।
तर उपचारका लागि काठमाडौं पुर्याउदा सम्म लोबै बुढाको अपेंडिक्स फुटिसकेको रहेछ र अपेंडिक्स फुटेपछि मान्छे बाँच्ने अवस्था हुदैन । अन्ततः लोबै बुढाले राजधानी मै प्राण त्यागिन ।
उनको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको कारण हेलिकप्टर चार्टर गरेर लोबै बुढालाई काठमाडौं ल्याउन सम्भव भएन । तैपनि जसोतसो राजधानीको हस्पिटलमा पुर्याउदा पनि भगवानले साथ् दिएनन दुबईमा रहेका उनका दाजुले मर्माहत हुँदै भने ।
लोबै बुढाका अनारी २ बर्षे दुधेवालक छन् तर उनले अब उप्रान्त आमाको दुध चुस्न पाउने छैनन । किनकि समयमा उपचार नपाउदा आमाको न्यानो काखले नै यो धर्तिबाट बिदा हुनुपरेको छ । उनि संगै उनका कलिला दाजु पनि टुहुरा बनेका छन् ।
यसरि उपचार गर्ने राम्रो हस्पिटल र यातायातको सुविधा नहुँदा हिजै देखि नागरिकहरु मृत्यु बेहोर्दै आउने बिकट बस्तीको पुरानो बेथा हो । देशमा गणतन्त्र आएको छ, तर पनि नागरिकहरु लाउला खाउला भन्ने बेलामा मृत्युवरण गर्नुपर्छ । यो सब हाम्रै देशको राज्य व्यबस्थाको कारण नै हो ।
यसपाली सडक बाटोघाटो बनाइदिन्छौ भन्ने नेतालाई भोट हालेकी बुढाको गाउँमा सडक बाटो पुग्ने सपना अधुरै रह्यो, बरु आफु बस्ने धर्तिनै छाड्नु पर्यो, सायद आजको युगमा यस्तो ज्युदो कथा संसारमा कहिँ कतै भेटिदैन ।
आखिरमा नेतालाई भोटको दाइजो सुम्पिएर सिहंदरवारको नजिकैको हस्पिटलबाट भौतिक रुपमा बिदा भइन लोबै बुढा ।
यातायातको गतिलो सुविधा नहुँदा आफ्नो नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने देशको पिडा कस्तो होला ? अनुमान नै गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासको नाउमा भोट असुल्ने नेताहरुको घैंटोमा अझै कहिले सम्म घाम लाग्छ ? यो खबर उज्यालो नेपालका अभियन्ता जनार्दन शर्मा सम्म पुग्नु पर्छ ।
काठमाडौं उज्यालो छ तर जनार्दन जन्मेको रुकुम अझै अध्यारो छ । बाटोघाटो नपाएर नागरिकहरु मर्नु पर्ने अबस्था छ । चुनावमा रुकुमलाई क्लिनस्विप गर्ने रुकुमका एक्ला प्रभाकरले आफ्ना दुर्गमका नागरिकको पिडा बुझ्नु पर्छ । यस्तो पिडा हरेक नेताले बुझ्न जरुरि छ ।
यसरि राज्य ब्यबस्थाको कारण नागरिकहरुले अकालमा मृत्यु बेहोर्नु पर्दाको पीडाबाट विक्षिप्त भएका उनका दाजु पृथीछक बुढाले युएईबाट मृतक बहिनीको नाममा यस्तो मार्मिक पत्र लेख्न बाध्य छन् ।
जब यसरी बिरामीलाई अस्पताल लगिदै गरेको दृश्यहरु देख्छु तब यो देशको ब्यबस्थालाई सम्झिन्छु । यो ब्यबस्था भित्र हामी जस्तो मान्छेहरुको अबस्थालाई सम्झिन्छु । हाम्रो गाउँघरमा एम्बुलेन्स गुड्ने दिन कहिले आउला ? हाम्रो टोलमा एउटा मेडिकल कहिले खुल्ला ?
अनि तिमी जस्तो बहिनिहरुले अल्पआयुमै जीवन गुमाउने अबस्था आउने थिएन । तिमी यो देशको कुनै नेताको श्रीमती, छोरी वा बुहारी हुँदी हो त, विमान चार्टर गरेर बिदेशमा उपचार गर्न जाने थियौ । के गरौं त, हाम्रो अबस्था यस्तै छ ।
जमिनमा सडक पुगेको छैन । आकाशमा हेलिकप्टर चार्टर गर्न पनि सक्दैनौं । त्यसैले तिमिलाई अस्पताल समयमा पुर्याउन सकिएन सायद । आफ्नो दूध चुस्ने वालकलाई छोडेर अलप भयौ ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय बहिनी ।
गोकर्ण विष्टद्धारा श्रम कार्यालयमा छड्के
नेकपा महासचिव पौडेलको दाबी-श्रीमतीको नामको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा ८ आना जग्गा
राष्ट्रियसभा सदस्यमा ३ जनाको नाम सिफारिस -नेपाल न्युज डट प्रेस
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा श्रीलंका बम विस्फोटप्रति दुःख व्यक्त